Ibhonasi yaseSpain Ayikho Idiphozithi - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Amakhasino aku-inthanethi avuma ukuthi abadlali beqembu lokugembula abavela eSpain bagqama ngokugqamile ngemifanekiso yabo, ukugcina imali nokukhushulwa okusebenzayo. Ngomdlali ngamunye ohlala eSpain futhi ofuna ukuzithela ngabandayo ekilabhini, senze ukukhetha KWABONKE amaqembu amahle kakhulu wokugembula waseSpain! Kunezinombolo ezinkulu kangaka zabaphakeli bezinhlelo ngakho-ke kunabadlali abaningi beqembu laseSpain abagembula, noma kunjalo kulandela umdlalo wethu wokubonisa iklabhu yaseSpain, uzojoyina amakilabhu wokugembula amahle kakhulu aseSpain asebenzisa uhlelo oluhle kakhulu lwaseSpain olunikeza. Lawo ma-clubhouse asemthethweni ase-Spain asemthethweni awabheka futhi azanywa ngaphambi kokuqoshwa kuleli khasi le-web, ukufakwa okusheshayo kanye nekhasimende lokuthola isitifiketi elinenzuzo usuku lonke, nsuku zonke. Ikilabhu yabo yokugembula ihlangana ngokuhambisana nomdlali we-clubhouse ovela eSpain.
Okuhambisana ne-webclubhouse eyamukela bonke abadlali be-ES yokugembula, vumela abadlali abahlala eSpain ukuba bagcine futhi badlale imishini yokuvula inthanethi noma ithebula nokuhlelwa kwekhadi kulabo abathintekayo eklabhu ngokujulile. Lapha, uzothola i-assortment ye-premium administrations mahhala ezokusiza ngokuthola i-club yokugembula yase-Spanish inthanethi.
Wonke ama-Casinos e-Spanish Online ahlanganiswe nawo:
Ukuvuselela nokuthuthuka okukhulu
Ehamba phambili futhi eqinile usuku lonke, nsuku zonke iklayenti iklayenti isikhulumi sendawo Spanish
Isimo seqembu elivikelekile nephephile!
Okungenani noma ngaphansi, i-Casino yaseSpain isebenzisa uhlelo olwenziwe futhi olutholakala ngezinqubo ezintsha ezinokwethenjelwa futhi lunikeza konke okudingayo eklabhukeni le-intanethi.
Iklabhu lomzimba laseSpain lisusa ikhasi encwadini yalo yokudlala yezimbangi online, ngokunikeza amaklayenti umvuzo wokuqala wesitolo.
UGrupo Ballesteros wamemezela ngesonto elidlule ukuthi uthola yonke isipho esisodwa esiyingqayizivele eGran Casino de La Mancha, ikakhulukazi eyaziwa ngokuthi iCasino de Illescas, eToledo, eSpain.
UBallesteros ubekhona ngaleso sikhathi umnikazi wecala elikhulu eklabhu yezintathu ezintathu, okwakungavunyelwe ukungena emuva ngonyaka owodwa emuva kwalokho, kodwa ngenxa yokuthi wayekhethiwe ekuthengeni izithandani ezincane uJuan José Sánchez Colilla noZhou Ye Haiguan wesizwe samaShayina.
Ukudumisa, i-clubhouse ibeka amaklayenti ayo uhlobo lwesikhathi esinqunyelwe esikhethekile esaziwa kakhulu ezindaweni zokubheja ezisuselwa kuwebhu kunezigcawu zemidlalo ezisuselwa emhlabeni. Ngokombiko wephephandaba laseSpain i-Azarplus, iklabhu yokugembula ithembisa ukuthi izivakashi zayo zizothola umklomelo we-20% ezitolo zazo ezingaphansi kuze kufike ku- € 250, zinganaki kangako ukuthi zidlala izikhala noma ukuphambukisa etafuleni.
IGrupo Ballesteros isebenza cishe imizila yamabhingo eyishumi nambili eSpain futhi igunyaziwe ngokufanayo ukusebenzisa izinto zebingo ne-clubhouse online emkhakheni webhizinisi wokubheja waseSpain olulawulwa nge-eBingo.es, ehlanganiswe ndawonye isebenza ngamabhingo amathathu amakhulu kakhulu asekelwe ezweni abaphathi: Grupo Ballesteros, Grupo Coves neBingos Reunidos.
Iwebhusayithi ye-eBingo njengamanje inezinciphiso zesiteshi se-omni, njengoba imivuzo eku-inthanethi ingafakazelwa kunoma isiphi isethingi sezinsizakalo zabaphathi bebhingo. Kunoma ikuphi, ngokusobala, uGrupo Ballesteros ukhethe ukuthi kunezinto ezithile ezi-inthanethi ezijwayelekile ezingaba nekusasa emhlabeni wokudlala.
Naphezu kwemisebenzi yalo yaseSpain, iGrupo Ballasteros nayo isebenza ngokuvuleka kanye nemisebenzi yebhingo eVenezuela, lapho inhlangano isondele khona isikhathi eside.
Amaqembu okugembula eSpain
Amakilabhu okugembula eSpain ayengekho emthethweni kwaze kwaba ngo-1977. Ngaphambi kwalokho, kwakuvunyelwe ama-lotto asetshenziswa uhulumeni. Kusukela ekuvinjelweni kwekilabhu eSpain, kuvele ukuthi badume kakhulu. Namuhla kunamakilabhu okugembula angaphezu kuka-60 amakhulu ezweni lonke. Amakilabhu ambalwa okugembula aseSpain afunwa nguhulumeni, kepha iningi lawo liyimfihlo. Imisebenzi isuka esifundeni iye endaweni, kepha iya kokujwayelekile okungama-55% kumholo ophelele, ngaphezu kwezindleko zebhizinisi ezinzuzweni. Ngakho-ke, cishe i-66% yeklabhu yaseSpain ayinazo izinzuzo ezingahlolwa ezishiywe yinoma imuphi umcabango.
Izinguquko eziqhubekayo emthethweni waseSpain ngonyaka ka-2012 zenze ukuphikisana okuthe xaxa ngokuvumela ngokusemthethweni iklabhu ekwi-inthanethi ukuthi isebenze. Isimo somzimba naso besilindelekile esingahlangabezana nokuxakaniseka okukhulu lapho umqageli wase-US uSheldon Adelson ehlose ukwakha indawo yokubungaza ephezulu ebizwa nge-Eurovegas. Noma ngabe kunjalo, umphathi wezezimali weqembu lokugembula ulahle imiklamo yakhe ngoDisemba 2013, ngemuva kwengxabano nochwepheshe bendawo ngokuhlolwa kanye nokuduba kokubhema e-clubhouse.
I-casinos e-Spain e-Spain
Umthetho 13 / 2011 ekugembula uvule indlela eya kubaqondisi be-intanethi ukuqeda ngokugunyazwa ngokomthetho eSpain kusuka ngoJuni 2012. Izinhlangano eziningi ziye zathola ithuba lokuthumela eyakhe indawo enomusa e-clubhouse e-intanethi, okwamanje ingxenye ejwayelekile yesimo esibukekayo.
Kuze kube nguJulayi 2014, i-clubhouse yewebhu yaseSpain yayivunyelwe nje ukunikela nge-roulette, i-poker, i-bingo, i-blackjack ne-baccarat, kepha izikhala zazinqunyelwe. Noma ngabe kunjani, manje uhulumeni waseSpain usabalalise izinkomba ezintsha futhi ufake nezindawo zokuzilibazisa nezokuhwebelana kwezohwebo ekugqekweni kwezokuphatha okusemthethweni kokubheja kwe-inthanethi. I-Spanish ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi
Umgwamanda ophethe iSpain - iDirección General de Ordenación del Juego - njengamanje uthola izicelo zemvume futhi yonke le nqubo incike ekutheni ithathe cishe isigamu sonyaka, lapho izivakashi zesikhala online ezigunyaziwe zaseSpain ziqala ukusebenza ngoJanuwari 1, 2015.
Kodwa nakuba abadlali abaningi baseSpain bavakashela lezi zindawo zokuhlala, ngaphandle kwamaqembu okugembula e-intanethi ahlinzeka nge-monty egcwele ayaziwa kakhulu phakathi kwabo.
I-125 yamahhala i-casino ku-PlayFrank Casino
I-70 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi e-Summit Casino
I-125 yamahhala i-spin casino ku-Prime Casino
I-105 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-CrazyScratch Casino
I-65 yamahhala e-Sunset Slots Casino
I-165 yamahhala i-casino e-Cash o Lot Casino
I-65 mahhala i-spin bonus ku-Instant Bingo Casino
I-125 yamahhala i-spin bonus ku-Black Lotus Casino
I-15 yamahhala i-casino e-Intragame Casino
I-115 mahhala ama-spins ku-huone Casino
I-65 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-EuroLotto Casino
I-20 i-spin bonus ayiyona i-Kajot Casino
I-155 yamahhala e-spin bonus e-Gorilla Casino
I-60 mahhala i-spin bonus ku-Golden Lion Casino
I-65 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Joy Casino
I-50 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Vegas Palms Casino
I-130 yamahhala i-casino e-Goldrun Casino
I-25 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-CyberClub Casino
I-160 ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Silver Oak Casino
I-120 yamahhala e-Yako Casino
I-70 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-Vegas2Web Casino
I-25 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti ku-Intertops Casino
I-60 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-Stanjames Casino
1 Amaqembu okugembula eSpain
2 I-casinos e-Spain e-Spain
5 Amakhodi amabhonasi e-casino amahle kakhulu: